Adeeg taleefoonka ah Oo Ay isku helayan Mucaashaqiinta Curyaanka Ah | Raadgoob
Adeeg taleefoonka ah Oo Ay isku helayan Mucaashaqiinta Curyaanka Ah
Dalka Hindiya dadka curyaanka ah inta badan laguma arko meelaha dadka isugu yimaadaan, waxayna taas dhacdaa iyaga oo tiro ahaan gaaaraya tobonaan milyan oo qof. Haddaba wariyaha BBC-da Ayeshea Perera ayaa la kulantay dad sameeyay adeeg cusub oo taleefoonka ah oo lagu magacaabo Incloy, kaas oo dadka curyaanka ah ay ku heli karaan lammaane iyo jacayl.
Image captionDadka baahiyaha gaarka qaba oo isugu yimid magaalada Dehli
Manish Raj, 34 jir ah oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in curyaanimada ay ku qasabtay in uu guriga iska joogo, markii uu damcay in uu ka qeybgalo meelaha ay dadka isugu tagaan in uu caqabad kala kulmo oo loo sheego in qofka gaariga curyaamada sida ay dadka kale tiiraanyo galinayaan.
Hindiya waa meelaha ugu daran ee ay ku noolaan karaan dadka curyaanka ah, gaar ahaan tasiilaadka ay heli karaa, dhaqanka dadka iyo waliba siyaasadaha dowladda. Qoysaska haysta ilmaha curyaanka ah ayaanan inta badan banaanka u bixinin, iyada oo bulshada ay u aragto ceeb curyaanimada.
Shankar Sriniyasan oo ka mid ah dadka asaasay adeegga ay curyaamada xiriirka ku sameeyaan, ayaa sheegay in dadka curyaanka loo arko in aysan bulshada qeyb ka ahayn.
Image captionManish Raj ayaa ka mid ah dadka ay dhibaaatada haysato
Fikradda Incloy ayaa dhalatay kadib markii ay isu tageen Shankar iyo Kalyani, waxayna ogaadeen in aysan jirin cid ka fikiraysa baahiyaha dadka curyaanka ah.
Waxa ay yabooh ku heleen lacag dhan $8,998, waxayna kireesteen injineer u abuura barnaamij ama adeeg xagga taleefoonka ah oo loogu talogalay dadka curyaamada ah oo tiradoodu gaarayso 80 milyan dalka Hindiya oo kaliya.
Waxa ay barnaaamijkan bilaabeen sanadkii 2016-kii, iyaga oo ku bilaabay 100 qof oo ay iska hubiyeen, balse markii dambe dadkii waa ay sii kordheen.
Balse waxa ay aad ula yaabeen dadka sameeyay barnaamijka in dadka ay isticmaalaan adeegga, kuna xiriiraan sida Whats App, balse ay aad u yaryihiin dadka sida tooska ah u kulma. Baaritaan kadib waxaa la ogaaday in caqabada ay tahay dadka oo u baqaya ammaankooda, iyo sidoo kale kaabayaasha dhaqaalaha ama tasiilaadka jira oon u ogolaanaynin dadka curyaanka badankood in ay galaan meelaha qaar, sida maqaayadaha oo uusan gaariga u galaynin.
Sidaasi darteed shirkadda waxa ay samaysay meelo loogu talogalay oo ay dadka ku kulmi karaan.
Waxa ay magaalooyinka Hindiya ka bilaabeen kulamo jadwalaysan oo dadkan laisugu keenayo, waxayna qabteen illaa 50 xafladood.
Image captionInclov ayaa qabanqaabisa kulamo ay isugu imanayaan dadka ka diiwaangashan adeegooda xiriirka isgaarsiineed
Shirkadaha qaar ayaa hadda ku dayday Incloy, waxayna bilaabeen in dhismayaashooda ay u sameeyaan albaabo ay ka gali karaan dadka curyaamiinta ah, shaqaalahana waxa ay siiyeen tabobaro dheeraad ah.
Adeegan waxa uu dadka u sahlay in ay samaystaan saaxiibo dhow, kuwaas oo xiriir joogto ah leh.
Sida uu qabo Shrey Marwah, 26 jir ah, kana mid ah dadka curyaanka ah, adeeggan waa mid kooban, wuxuuna doonayaa in isku xir loo sameeyo dadka curyaanka ah iyo kuwa laxaadkooda dhamaystiranyahay.
Image captionMeel ka mid ah kuwa dadka la’isugu keenay
Balse Mr Srinivasan ma doonayo in adeegga Inclov uu noqdo meel laga ololeeyo, oo qadiyaddo gaar ah lagu horumariyo.
Wuxuu intaas ku daray in aysan doonaynin in ay dowladda ka hor yimaadaan, iyaga shaqadooduna tahay in ay dhib jira uun xaliyaan.
Waxaa arrinkaas ku raacsan Nipun Malhotra oo u ololeeya dadka curyaanka ah, wuxuuna yiri “Waa arrin murugo leh, maxay tahay sababta qof kasta oo Hindiya ku nool oo curyaan ah uu u yahay qof u ololeeya xuquuqda dadka curyaamiinta ah?, sababta waxa ay tahay qof hawshaas u qabanayo ma jiraan. Taasna waa in ay is badashaa”.